Umehluko phakathi kweFuneral neSikhumbuzo Service - Sendoff Funeral App
Umehluko phakathi kweFuneral neSikhumbuzo Service
Akumangazi ukuzwa abantu bekhuluma ngensizakalo yesikhumbuzo lapho bexoxa ngokufa komuntu omthandayo. Umkhuba lo udume kakhulu kangangokuba abaningi manje bavame ukudida inkonzo yesikhumbuzo ngenkonzo yomngcwabo. Kuyathakazelisa nokho; yimicimbi emibili ehlukene eyenzelwe ukufeza inhloso efanayo- ukukhokha inhlonipho yokugcina nokukhumbula impilo yomuntu oshonile. Uma ngeshwa ulahlekelwe othandekayo futhi ufuna umbono ongcono ukuze uthathe isinqumo, lokhu okuthunyelwe kungokwakho.
Inkonzo yomngcwabo ngumkhosi owenziwa emathuneni (uma isidumbu sizongcwatshwa) noma kwesinye isikhathi esontweni (ikakhulukazi uma ezinye izindlela zokulahla umzimba ezingezona ezendabuko njengokushiswa komzimba, i-alkaline hydrolysis kanye nokunikela ngomzimba esikhungweni sokucwaninga , uyakhethwa).
Inkonzo yomngcwabo imvamisa inesidumbu somufi okhona emcimbini, imvamisa ebhasikidi elivulekile ukuze amalungu omndeni, izihlobo nabangane babone ngempela ukuthi kungani bekhona futhi bangakwamukela kalula ukufa.
Inkonzo yomngcwabo nayo ivame ukwandulelwa yi-wake noma lokho abanye abangakubiza ngokuthi ukubukwa. Isidumbu esihlotshisiwe sibonwa ngabalilayo njengoba beza bezokhokha inhlonipho yabo. Ungabuza, kuthiwani uma umzimba ushisiwe futhi i-urn ikhona? Kulokhu, ngeke kusaba ngumngcwabo, kodwa kube yinkonzo yesikhumbuzo.
Lokhu kufana kakhulu nenkonzo yomngcwabo ngakho-ke kulula ukudida laba bobabili. Ngokungafani nenkonzo yomngcwabo, kubanjwa isikhumbuzo sokukhumbula umuntu oshonile ngaphandle kwesidumbu esikhona. Ezimweni eziningi, kubanjwa ngemuva komngcwabo lapho izinsalela ziye zaphathwa noma umlotha ogcinwe ku-urn esimweni sokushiswa kwezidumbu. Noma kunjalo, kunezimo ezimbalwa lapho inkonzo yesikhumbuzo yenzeka ngaphambi kwenkonzo yomngcwabo yokugubha impilo yomuntu.
Inkonzo yesikhumbuzo imvamisa yenziwa ngaphandle kwengcindezi eza nomngcwabo. Umndeni uvame ukukhululeka ngokwengeziwe futhi wenze ukuhlela okuningi ukuwenza umcimbi omkhulu. Eminye imindeni ihlela inkonzo yesikhumbuzo yokuvumela abangane namanye amalungu omndeni (ababengekho emsebenzini womngcwabo) ukuthi bakhokhele inhlonipho yabo bese bethi okuhle kubo kamufi. Ezimweni ezinjalo, umndeni uvame ukwenza inkonzo encane yomngcwabo ngaphambili ebandakanya amalungu omndeni asondelene kuphela, futhi mhlawumbe nabangane abambalwa.
Ukufana phakathi kweFuneral Service kanye neSikhumbuzo
Zombili izinsizakalo zomngcwabo kanye nenkonzo yesikhumbuzo zihlelelwe ukufeza izinhloso ezifanayo, kufaka phakathi nokusiza umndeni ososizini ukuqhubeka, ukusiza wonke umuntu ukwamukela iqiniso lokufa, kanye nokuhlonipha umuntu osedlulile.
Inkonzo yomngcwabo nenkonzo yesikhumbuzo ilandela isakhiwo esifanayo; ukuqala ngokubuka, umngcwabo, ukuzibophezela nokwamukela.
Futhi, zombili izinkonzo zomngcwabo nesikhumbuzo ziqukethe imisebenzi efanayo, kusukela ezintweni zenkolo zokufundwa, izingoma nemikhuleko ye-eulogy nokuzindla.
Zombili lezi zinsizakalo zingabanjwa esontweni (chapel) noma emathuneni.
Zombili zingabiza imali eningi, kusukela ezinkulungwaneni zama-Rands noma ama-dollar kuya ezigidini zama-Rands wezibalo zomphakathi, zombuso noma zosaziwayo.
Umjikelezo osheshayo woMehluko
Isidumbu esikhona sikhona enkonzweni yomngcwabo, kepha asikho enkonzweni yesikhumbuzo.
Ukuba khona kwe-urn (uma isidumbu sikamufi sishisiwe) kukhombisa insizakalo yesikhumbuzo, kuyilapho ibhokisi elivulekile noma elivaliwe libonisa inkonzo yomngcwabo.
Endabeni yokungenelela (ukungcwatshwa), inkonzo yomngcwabo imvamisa yenzeka ngaphambi nje kokuba isidumbu singcwatshwe. Inkonzo yesikhumbuzo, ngakolunye uhlangothi, ingenzeka ezinsukwini ngaphambi noma ezinsukwini / izinyanga / iminyaka ngemuva komngcwabo.
Manje njengoba wazi ukuthi yomibili le misebenzi yehlukile, ungenza ukukhetha ngokuya ngesimo phansi. Yini izifiso zomuntu oshonile? Ngabe basho ngentando ukuthi bakhetha ukushiswa noma enye indlela yomngcwabo? Uma kunjalo, lokho ozoba nakho kuyinkonzo yesikhumbuzo. Uma umufi engashongo, ungaba nenkonzo yomngcwabo, nomzimba okhona, nenkonzo yesikhumbuzo, ne-urn (imivimbo) ekhona.
Kukhona futhi ezinye izimo lapho umzimba kamufi ungatholakali. Kwabanye, umufi kungenzeka afune ukuthi umzimba wabo unikelwe esikhungweni sokucwaninga noma esikhungweni sezokwelapha. Kunoma yisiphi kulezi zimo, insizakalo yesikhumbuzo nayo yanele ukukhokha intela kwabafileyo futhi ihloniphe impilo ababeyiphila.
Ngaphandle kwalezi zimo, imindeni eminingi ayinandaba nokuthi ibe nenkonzo yomngcwabo nenkonzo yesikhumbuzo. Imvamisa, umngcwabo ubanjwa ngaphambi nje kokungenelela ngenkathi isikhumbuzo singabanjwa kamuva kakhulu. Eminye imindeni imane inamathele ngenkonzo yomngcwabo wendabuko engaphezulu nomzimba okhona ebhokisini elivulekile noma elivaliwe. Isinqumo sakho ngokwemvelo sizonqunywa ngesimo, ukuthengwa, ukukhetha nokukhetha umufi noma umndeni.